မိတ္တူကူးနည်း | Gadget သတင်း
အရန်ကူးမိတ္တူကူးခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကျင့်သုံးရမည့်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သိုလှောင်ထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအမြဲတမ်းမဆုံးရှုံးလိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုသည့်ကွဲပြားသောလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုတွေ့ရှိနိုင်သော်လည်းပျက်စီးမှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၎င်းသည်လုံးဝအသုံးမ ၀ င်ပါ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသုံးစွဲသူများသည်ကွန်ပျူတာများကိုမိုဘိုင်းသို့ပြောင်းရန်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ ၎င်းတို့သည်တက်ဘလက်ဖြစ်စေ၊ စမတ်ဖုန်းဖြစ်စေ၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပူးတွဲဖိုင်များပါသောအီးမေးလ်ပို့ခြင်းမှရှုပ်ထွေးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုရေးသားခြင်းနှင့်ပုံစံချခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလုပ်ရတာပိုပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်ပတ်သတ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုသိရှိထားရန်အရေးကြီးသည် မိတ္တူကူးယူနည်း။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်မှသာမကကွန်ပျူတာ မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်အသုံးပြုနေသရွေ့သို့မဟုတ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်ဂေဟစနစ်ပေါ် မူတည်၍ နည်းလမ်းသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ Cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများဖြင့်ဖန်တီးနှစ်ခုစာရွက်စာတမ်းများ, ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအားလုံးတစ်နေရာတည်း၌စုဝေးစေ။
ဂေဟစနစ်တစ်ခုချင်းစီသည်ယေဘူယျအားဖြင့်အရန်ကူးယူခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းကိရိယာများကိုထားရှိပေးသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်စရာများကိုပြသပါမည် Windows, Mac, iOS နှင့် Android တွင်အရံကူးခြင်းများ။
1 Windows တွင်အရန်ကူးခြင်း
2 Mac တွင်အရန်ကူးခြင်း
3 Android မှာ Backup လုပ်ထား
4 iOS မှာ Backup လုပ်ထားတယ်
4.1 iOS အတွက်အရန်ကူးခြင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ
Windows 10 မတိုင်မီဗားရှင်းများကကျွန်ုပ်တို့အားအရန်ကူးယူရန်ခွင့်ပြုထားသည်မှာမှန်သော်လည်း၊ ဤမူကွဲစတင်ချိန်အထိသာဖြစ်သည် သူတို့ကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်ဤမျှလောက်ရိုးရှင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။
Windows 10 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားရံဖန်ရံခါမိတ္တူကူးရန်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်တော်ယခင်ကရွေးချယ်ထားသည့်ဒေတာမိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သောကြောင့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများကဲ့သို့သောစနစ်မှကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဖိုင်တွဲများကိုသိမ်းဆည်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
Windows 10 မှာ backup တွေကို activate လုပ်ဖို့၊ အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
ပထမ ဦး စွာ Windows 10 configuration ကို Windows key + i command မှတဆင့်သို့မဟုတ် Start menu မှတဆင့်ဂီယာဘီးကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အပ်ဒိတ်နှင့်လုံခြုံရေး> အရန်ကူးရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုအရန်ကူးလိုသည့် disk drive ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အရံသိမ်းဆည်းခြင်းတွင်သိမ်းဆည်းလိုသည့်အချက်အလက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ ဤမီနူးအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏အရန်ကူးတွင်သိမ်းထားလိုသောလမ်းညွှန်အားလုံးကိုပြလိမ့်မည်။ Backup တွင်မည်သည့်ဇာတိ directory များကိုသိမ်းဆည်းမည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Time Machine application, time machine တစ်ခု၊ စာရွက်စာတမ်းအသစ်များကိုပြင်ပ hard drive ထဲသို့ကူးယူရန်တာ ၀ န်သာမက application တစ်ခုမှတဆင့်အရန်ကူးယူရန်ဖြစ်နိုင်ချေကို Apple ကနှစ်အတန်ကြာကတည်းကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထားသောဖိုင်အားလုံး၏ကော်ပီတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့ကိုအခြားမိတ္တူတစ်ခုဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။
သင်မိတ္တူအားလုံး၊ သူတို့ကအချိန်စက်တစ်ခုလိုအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ပယ်ဖျက်မိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သောရက်စွဲသို့ကူးယူခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
သွားနေတယ် ပြုပြင်ထားသောဖိုင်များအားလုံး၏နေ့စဉ်မိတ္တူများကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၎င်းသည်စနစ်၏ဒေတာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသဖြင့်၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာယူလိုလျှင်လုပ်ရန်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ယူသည်။ သို့သော်စည်းကမ်းအရအမြဲတမ်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောအချက်အလက်များ။
Time Machine ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် Apple ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆိုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်အစကန ဦး ရှုပ်ထွေးပုံရသော်လည်းလုံးဝတော့မဟုတ်ပါ။ ဖိုင်ဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်တယ်။
Android မှာ Backup လုပ်ထား
ဒါ့အပြင်ဂူးဂဲလ်ကလဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီ option တစ်ခုပေးထားပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအရန်ကူးထားရန်ခွင့်ပြုသည်ဆုံးရှုံးမှု၊ ခိုးမှု (သို့) ပျက်ပြားမှုဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိုးရိမ်စရာနှစ်ချက်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။
Android s တွင်အရန်ကူးခြင်းများနှင့်သိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုမိတ္တူကူးရန်တာဝန်ရှိသည်စကားဝှက်များမှ Wi-Fi ကွန်ယက်များသို့ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းအပါအဝင်။ ၎င်းသည်စက်ပစ္စည်းနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်ဒေတာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုလည်းသိမ်းဆည်းသည်။
ကိုသက်ဝင်စေဖို့ Android တွင်အရန်ကူးခြင်းများ အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ဦး ဆုံး၊ setting များကို
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်မိတ္တူ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်သိမ်းထားသောဒေတာအားလုံးကိုအရန်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် switch ကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်သည်။
နောက်ဆုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်မီနူးသို့ပြန်သွားပြီးကိုနှိပ်ပါ Backup အကောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုပြီးရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးယူလိုသောအကောင့်ကိုတည်ထောင်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏အရန်ကူးခြင်းကို Google Drive တွင်သိမ်းထားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသိမ်းဆည်းရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိရမည်။
iOS မှာ Backup လုပ်ထားတယ်
Apple က iCloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားရရှိနိုင်စေသည်၊ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏စက်၏မိတ္တူပွားများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Apple က ၅ GB နေရာလွတ်ပေးထားတယ် Apple ID ရှိသည့်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအရန်ပြုလုပ်ရန်ယေဘုယျအားဖြင့်မလုံလောက်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုသိုလှောင်မှုနေရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ငွေမပေးလိုသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကို PC သို့မဟုတ် Mac သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ iTunes မှတဆင့်အရန်ကူးပါကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သည်ပျက်စီးခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသည့်အကြောင်းအရာအားလုံး၏မိတ္တူတစ်စုံကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
ဤအရန်ကူးကိုအားလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ လျှောက်လွှာများနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများ terminal ကိုအတွင်းပိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှ backup မိတ္တူများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ဦး ဆုံး၊ setting များကို.
အတွင်း setting များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးတော့ iCloud.
ထိုအခါငါတို့တက် ဦး အရန်ကူးခြင်း ငါတို့သည်သက်ဆိုင်ရာ switch ကိုသက်ဝင်။
iCloud i ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှပြုလုပ်သော backup များ၎င်းတို့တွင်အကောင့်များ၏အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မူလအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ချိန်ညှိချက်များပါဝင်သည်။ Terminal သည်လက်ရှိ၊ အားသွင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်တိုင်း၎င်းမိတ္တူများကိုပြုလုပ်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်အလက်တွေများများသိမ်းလေလေ၊ နေရာပိုများရန်အတွက်အရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏အရန်ကူးခြင်းကိုပြန်ယူပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကတပ်ဆင်ထားသည့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်အတူဒေတာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက် Apple ရဲ့ operating system အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုပြောရမယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Cupertino မှယောက်ျားများသည် iOS ဗားရှင်းသစ်ကိုဈေးကွက်ထဲ၌ ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်ဖက်သောဗားရှင်းသစ်ကိုထုတ်လွှင့်သည်။5နှစ်အထိမော်ဒယ်များနှင့်သဟဇာတ။
iOS ဗားရှင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်း၊ ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသော application များ၏အချက်အလက်များကိုဆွဲယူခြင်းမရှိဘဲလုံးဝသန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပေးသည်။ ။ ကျွန်ုပ်တို့စက်၏သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့် ယခင်ကူးယူထားသည့် backup ကိုဘယ်သောအခါမျှပြန်မထားသင့်ပါ။
ဤအပလီကေးရှင်းများ / ၀ န်ဆောင်မှုအများစုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် နေ့စဉ်အရန်ကူးပါ အသုံးပြုသူများသတိမပြုမိဘဲကျွန်ုပ်တို့မပြောင်းသင့်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ terminal သည်မတော်တဆမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရမည့်အချိန်ကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၊ ယခင်ကူးယူထားသည့်မိတ္တူအသစ်များအစားယေဘူယျအားဖြင့်အရန်ကူးယူထားသောကော်ပီအသစ်များသည်အစားထိုးသည် ကျနော်တို့ကထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကန ဦး ခွဲဝေပေးထားသောအာကာသ, တိုးမြှင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုအမြောက်အများကိုရိုက်ကူးဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမအပ်နှံဘူးဆိုရင်။
မိတ္တူကူးရန်ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောယူနစ်၊ ကျနော်တို့ကသာရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်၎င်းကိုရုပ်ရှင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်နေ့စဉ်အသုံးပြုသူဓာတ်ပုံများစသည့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မသုံးပါနှင့်။ ထို hard disk ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလေလေ၊ ၎င်း၏ဘ ၀ သည်ပိုမိုမြင့်မားလေလေဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးမိသောကော်ပီယိုယွင်းလာနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မ run ပါ။
သင်ကူးယူလိုသောဖိုင်အမျိုးအစားတွင်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများမပါ ၀ င်ပါကစာရွက်စာတမ်းများသာဖြစ်ပါကအကောင်းဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည် Cloud သိုလှောင်မှုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါသင့်ဖိုင်များကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် application တည်ရှိရာကွန်ပျူတာများတွင်အမြဲတမ်းထပ်တူပြုသည်။
ဤကိစ်စတှငျ ဂူဂဲလ်ဒရိုက်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခမဲ့နေရာ ၁၅ GB သာပေးသည်၎င်းသည်မည်သည့်မိုဘိုင်း application နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်သဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဖွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့တည်းဖြတ်ပါက၎င်းတို့သည်တိမ်တိုက်နှင့်ချက်ချင်းထပ်တူပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသောနောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » မိတ္တူကူးယူနည်း
Huawei သည် P Smart 2019 အသစ်နှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားစျေးကွက်တွင်ဆက်လက်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်